पृथ्वी | Радоје Домановић
Tag Archive | पृथ्वी
– दाजु-भाइहरू र साथीहरू, मैले तपाईंको सबै भाषणहरू सुनें, त्यसैले अब मेरो पनि सुन्न आग्रह गर्छु। हाम्रा सबै विचार-विमर्श र कुराकानीहरूको कुनै महत्त्व हुँदैन जबसम्म हामी यस बाँझो क्षेत्रमा रहन्छौं। वर्षाको वर्ष भए पनि यस बलौटे माटोमा र यी ढुङ्गाहरूमा केहि पनि उम्रन सकेको छैन, यस खडेरीमा एक्लै छोडिदेओ जुन हामी मध्ये कसैले पनि पहिले कहिल्यै देखेका थिएनौं। कहिलेसम्म हामी एसरी एक साथ भेला हुने र व्यर्थ कुरा गर्ने? गाईवस्तुहरू खानेकुरा बिना मरिरहेका छन्, र धेरै चाँडै हामी र हाम्रा बच्चाहरूलाई पनि भोकमरी लाग्नेछ। हामीले अर्को समाधान खोज्नु पर्छ जुन राम्रो र अधिक समझदार छ। मलाई लाग्छ यो सुक्खा भूमि छोड्नु उत्तम हुनेछ र संसारमा राम्रो र अधिक उर्वर माटो पत्ता लगाउन सुरु गर्नु पर्छ किनकि हामी एसरी लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैनौं।
यसैले केही बांझो प्रान्तका बासिन्दाहरूले सभामा थकित आवाजमा एक पटक बोले। मलाई लाग्छ, कहाँ र कहिले त्यो तपाईं वा मलाई मतलब छैन। मलाई विश्वास गर्नु महत्त्वपूर्ण एस कारण छ कि यो धेरै पहिले कतै भएको थियो र यो पर्याप्त छ। इमान्दार हुनुपर्दा, एक समय मैले सोचे कि मैले यो सम्पूर्ण कथा आविष्कार गरें, तर अलि-अलि गर्दै मैले आफूलाई यस नराम्रो भ्रमबाट मुक्त गरें। अब म पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दछु कि वास्तवमै के भयो र कहाँ र कतै घटेको हुनुपर्दछ र मैले कुनै पनि हालतमा यसलाई बनाएको छैन भनेर बताउन जाँदैछु।
श्रोताहरू फिक्का, थकित अनुहार र खाली, चिन्ताजनक, लगभग अबुझ हेराइ, आफ्नो बेल्ट मुनि उनीहरूका हातहरू, यी बुद्धिमानी शब्दहरूमा जीवित थिए जस्तो देखिन्थ्यो। प्रत्येकले कल्पना गरिसकेका थिए कि त्यो कुनै किसिमको जादुइ, स्वर्गिय देश हो जहाँ परिस्रमको इनाम प्रशस्त बालीनाली हुनेछ।
– ऊ सही छ! ऊ सही छ! – सबै तिरबाट थकित फुसफुसे आवाज आयो।
– के त्यो ठाउँ न न…जि…जि…क छ? – एक लामो आवाजमा गन गन गरेको आवाज कुनाबाट सुनियो।
– दाजुभाइहरू! – अर्को केही अलि बलियो आवाजको साथ शुरू भयो। – हामीले यस सल्लाहलाई तुरून्त पालना गर्नैपर्दछ किनकि हामी अब उप्रान्त यसरी अगाडि जान सक्दैनौं। हामीले परिश्रम गरेका छौं र आफैंलाई तनावमा पारेका छौं, तर सबै व्यर्थ गएका छन। हामीले बिउ रोपेका छौं जुन खानेकुराका लागि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, तर बाढी आयो र बिउ र माटोलाई पानीले धोईदियो र केवल चट्टान मात्र बाँकी रह्यो। के हामी यहाँ सदाका लागि बस्ने र बिहान देखी साँझ सम्म मेहेनत गरेर भोकै, प्यासै, नाङगै र खाली खुट्टा बस्ने? हा हामीले अब यो भन्दा राम्रो र मलिलो मातो खोज्नु पर्छ जहाँ परिस्रम गरे पछी प्रसस्त बालीनानी उत्पादन होस्।
– जाऔं! हामी तुरुन्तै जाऔं किनकि यो ठाउँ अब बस्न योग्य छैन!
फुसफुके आवाज आयो, र सबै आफू कहाँ जाँदैछु भन्ने थाहा नभएरै हिंड्न थाले।
– रोक्नुहोस् दाजुभाइहरु! तपाईंहरु कहाँ हुनुहुन्छ? – फेरि पहिलो वक्ता शुरू भयो। – निश्चित छ कि हामी जानु पर्छ, तर यसरी हैन। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि हामी कहाँ जाँदैछौं। अन्यथा हामी आफु बाच्नुको सट्टा अझ खराब अवस्थामा पुग्न सक्छौं। मेरो सुझाव छ कि हामी एक त्यस्तो नेता छनौट गरौ जसको हामी सबैले पालना गर्नु पर्छ र जसले हामीलाई उत्तम र सिधा बाटो देखाउने छ।
– आउनुहोस् छानौं! हामी अहिले नै कसैलाई छनौट गरौ – चारै तिर सुनियो।
अब केवल बहस उत्पन्न भयो, एक वास्तविक अराजकता। सबै जना कुरा गरिरहेका थिए र कोही कसैलाई सुनेको पनि थिएनन र कसैलाई सुन्न पनि सक्षम थिएनन्। तिनीहरू समूहमा विभाजित हुन थाले, प्रत्येक व्यक्ति आफैंमा गनगनाउँदै थिए, र त्यसपछि समूह पनि टुक्रियो। दुई-दुईमा, तिनीहरू एक अर्का हातले कुरा गर्न थाले, कुरा गरिरहे, केहि प्रमाणित गर्न कोसिस गर्दै, एक अर्कालाई बाहुलाले तान्दै, र उनीहरूको हातले मौन गति बनाए। तिनीहरू सबै फेरि भेला भए, कुरा गरिरहे।
– दाजु भाइहरू! – अचानक एक शक्तिशाली आवाज को लागी आवाज आयो जस्ले अन्य सबैको आवाजलाई कर्कश र सुस्त बनायो। – हामी यस प्रकारले कुनै पनि प्रकारको सम्झौतामा पुग्न सक्दैनौं। सबै जना कुरा गर्दैछन र कसैले सुन्दैन। एक नेता छनौट गरौं! हामी मध्ये कसलाई छनौट गर्न सक्छौं? हामी मध्ये कसले सडकहरू जान्नका लागि पर्याप्त यात्रा गरेको छ? हामी सबै एक अर्कालाई राम्ररी चिन्छौं, र म यहाँ एकल व्यक्तिको नेतृत्वमा आफैलाई र मेरो बच्चाहरूलाई राख्दिन। बरु, मलाई भन्नुहोस् कि त्यो यात्रुलाई कसले चिन्छ, जुन आज बिहानदेखि सडकको किनारमा छायामा बसिरहेको छ?
मौनता छायो। सबै आन्जान मानिस तर्फ फर्किए र उसलाई टाउको देखि खुट्टा सम्म हेरे।
त्यो यात्री, मध्यम बुढो, जस्को उदास अनुहार दाह्री र लामो कपालको कारण बिरलै देखिन्थ्यो, उ त्यहाँ बस्यो र पहिले जस्तै चुप रह्यो, विचार मा लीन, र समय समय मा आफ्नो ठुलो लट्ठी जमिन मा हिर्काउथ्यो।
– हिजो मैले त्यो मनिसलाई एउटा केटोको साथ देखेको थिए। तिनीहरू एक अर्काको हात समातेर गल्लीमा गइरहेका थिए। र हिजो राती केटाले गाउँ छोड्यो तर अपरिचित यहीं बसे।
– दाजुभाइ, यो मूर्खतापूर्ण वैयात कुरा भुलौ ताकी हामीले कुनै समय गुमाउन नपरोस। उ जो कोही हो, ऊ टाढाबाट आएको हो किनकि हामी मध्ये कसैले उहाँलाई चिनेका छैनौं र हामीलाई नेतृत्व दिने सबैभन्दा छोटो र उत्तम तरिका उसलाई अवश्य थाहा छ। यो मेरो निर्णय हो कि उ एक धेरै ज्ञानी मानिस हो किनकि उ त्यहाँ चूपचाप बसिरहेका छ र सोचमा छ। अरू कसैले हाम्रो मामिलामा दश चोटि वा सो भन्दा बडि पहिलेनै बोलिसक्थ्यो वा हामी मध्ये एकसँग कुराकानी सुरु गरेको हुन्थ्यो, तर ऊ त्यहाँ पूरै समय एक्लै बसिरहेको थियो र केही बोलेको थिएन।
– पक्कै पनि मानिस चुपचाप बसिरहेको छ किनकि उसले केहि सोचिरहेको छ। ऊ एकदम चतुर छ यो बाहेक अन्यथा हुन सक्दैन – अरुलाई सहमत बनायो र फेरि अपरिचितको जाँच गर्न शुरू गर्यो। प्रत्येकले उनीमा एक उत्कृष्ट गुण पत्ता लगाएका थिए जुन उसको असाधारण बौद्धिकताको प्रमाण थियो।
कुरा गर्न धेरै समय खर्च गरिएन, त्यसैले अन्तमा सबै सहमत भए कि यस यात्रीलाई सोध्नु नै उत्तम हुन्छ – जसलाई उनीहरूले हेरेको थिए, परमेश्वरले उनीहरूलाई यस संसारमा राम्रो ठाउँ र अधिक उर्वर माटोको खोजीमा लैजान पठाउनुभएको थियो। उ तिनीहरूको नेता हुनुपर्दछ, र तिनीहरूले उनको कुरा सुन्नपर्नेछ र कुनै प्रश्न बिना उहाँको आज्ञा पालन गर्नपर्नेछ।
तिनीहरूले आफू माझबाट दश जना मानिसहरूलाई रोजे जो अपरिचित व्यक्तिलाई उनीहरूलाई आफ्नो निर्णय बताउन गएका थिए। यो प्रतिनिधिमण्डलले उनलाई दयनीय अवस्था देखाउँदै उनलाई उनीहरुको नेता हुन भन्यो।
ती दश जना नजिक गए र नम्रतापूर्वक शिर झुकाए। तिनीहरू मध्ये एकले क्षेत्रको अनुत्पादक माटोको, सुख्खा वर्षहरू र उनीहरू सबैले आफुले भोगेको दु: खको बारेमा कुरा गर्न थाले। उनले निम्न तरिकाले समाप्त गरे:
– यी सर्तहरूले हामीलाई हाम्रो घर र हाम्रो भूमि छोड्न र संसारमा राम्रो मातृभूमि खोज्न बाध्य तुल्याउँछन्। यस क्षणमा जब हामी अन्तमा सम्झौतामा पुगेका छौं, यस्तो देखिन्छ कि भगवान्‌ले हामीमाथि कृपा दर्शाउनुभएको छ, कि उहाँ तपाईंलाई पठाउनुभयो – तपाईं एक बुद्धिमान र योग्य अपरिचित – र तपाईंले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो भने र हामीलाई हाम्रो दु: खबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेछ। यहाँका सबै बासिन्दाहरूको नाममा हामी तपाईंलाई हाम्रो नेता हुन आग्रह गर्दछौं। जहाँसुकै जान सक्नुहुन्छ, हामी पछ्याउनेछौं। तपाईंलाई सडकहरू थाहा छ र तपाईं निश्चित रूपमा खुशी र उत्तम जन्मभूमिमा जन्मनुभएको थियो। हामी तपाईंलाई सुन्नेछौं र तपाईंका सबै आदेशहरू पालन गर्नेछौं। के तपाईं, विनाशबाट धेरै प्राणहरू बचाउन सहमत हुनुहुन्छ? के तपाईं हाम्रो नेता बन्नुहुनेछ, बुद्धिमान अपरिचित?
सबै यस उत्तेजित भाषणको समयमा, बुद्धिमान अपरिचितले एक पटक पनि टाउको उठाएनन। सारा समय उहाँ उही स्थितिमा रहे जस्तो उनीहरूले उन्लाई भेट्टाएको थिए। उन्को टाउको तल झरेको, उनी भूँईमा लडिरहेका थिए, र उनले केही पनि भनेनन्। उनले केवल समय-समयमा र आफ्नो लट्ठी भुइ मा हिर्काउथे र – सोच्थे। जब भाषण समाप्त भयो, तब आफ्नो स्थिति नबादलेरै उनले बिस्तारै घुमाउरो परे:
– म हुन्छु!
– त्यसोभए हामी तपाईंसँग जान सक्छौ र राम्रो ठाउँ खोज्न सक्छौं?
– तिमी सक्छौ! – उसले आफ्नो टाउको नउठाएरै जारी राखे।
अब उत्साह र प्रशंसा को अभिव्यक्ति उठेको छ, तर अपरिचितले यसको कुनै एक शब्द भनेनन्।
ती दश जनाले आफ्नो सफलताको बारे सम्मेलनमा जानकारी दिए र थप्दै भने कि उनीसँग महान् बुद्धि छ भनेर अब तिनीहरूले केवल मात्र देखे।
– उनी तेस स्थान देखी अलीकती पनि सरेको थिएनन वा कम्तिमा को बोलेको छ भनेर हेर्न सम्म टाउको उठाएनन। उनी केवल चुपचाप बसे र ध्यान गरे। हाम्रो सबै कुरा कदर गर्न उसले केवल चार शब्दहरू बोले।
– एक वास्तविक ऋषि! दुर्लभ बुद्धिमत्ता! – तिनीहरू खुशीसँग सबै पक्षबाट चिच्याए कि परमेश्वर आफैले उनलाई बचाउन स्वर्गबाट एउटा स्वर्गदूतको रूपमा पठाउनुभयो। सबै एक त्यस्तो नेताको सफल नेतृत्वमा विश्वस्त थिए जसलाई संसारमा कुनै कुराले असन्तुष्टि दिन सकेन। र त्यसैले यो सबै कुरा भोलिपल्ट बिहान गर्ने निर्णय गरियो।